Visitor is reading विश्वचर्चित आठ लेखक, जसले गरे आत्महत्या
Visitor is reading Roommate wanted in Bay Area
Visitor is reading How to say "spritual" in Nepali???
Visitor is reading Prachanda dances "Simple Simple kanchi ko"
Visitor is reading HINDUISM IS BHAUN IMPOSED RELIGION
Visitor is reading Java Proxy Male available for java calls
Visitor from NL is reading गोब्रे न्यास को चर्तिकला
Visitor is reading dukhai pauna aiecha Amrika ni
Posted on 09-26-18 10:14 PM Reply [Subscribe]
विश्वचर्चित लेखक–कलाकार पनि आममान्छेजस्तै विभिन्न समस्यामा जेलिएका हुन्छन् । तर पनि उनीहरू सिर्जनात्मक कार्यमा भने लागिरहेकै हुन्छन् । विश्वसाहित्यलाई एकपटक हेर्ने हो भने धेरै सफल लेखकहरूले आत्महत्या गरेका छन् ।
वर्षौंसम्म डिप्रेसनमा रहेर आफैंलाई मार्ने लेखकहरूको सूची पनि लामो छ । आफ्नो लेखनबाट विश्वमा चिनिएका यी लेखकहरूले डिप्रेसनलगायतका कारणहरूले आत्महत्या गरे ।
१. अर्नेस्ट हेमिङवे
अर्नेस्ट हेमिङवे निकै प्रसिद्ध र सफल लेखकमा चिनिन्छन् । उनको चर्चित कृति ‘द ओल्ड मेन एन्ड द सी’ले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो । सन् १८९९ मा जन्मिएका हेमिङवेले ६१ वर्षको उमेरमा आत्महत्या गरेका हुन् । अमेरिकाको इडाओ प्रान्तको केटचुम भन्ने ठाउँमा सन् १९६१ जुन २ मा उनले आफैंलाई गोली हानेर आत्महत्या गरे । उनको ‘द ओल्ड मेन एन्ड द सी’ सँगै ‘ए फेयर वेल्स टु आम्स’, ‘द सन अल्सो राइजेस’ चर्चित कृति हुन् ।
२. भर्जिनिया उल्फ
सन् १८८२ मा जन्मिएकी भर्जिनिया उल्फले आफू ५९ वर्षको उमेरमा पानीमा डुबेर आत्महत्या गरेकी हुन् । उल्फले आफ्नो सुसाइड नोटमा लेखेकी थिइन्, ‘प्रिय, म महसुस गरिरहेकी छु कि म फेरि बौलाउँदै छु । मलाई लाग्छ हामी फेरि यस्तो समयबाट पार हुन सक्दैनौं । र म समयलाई रोक्न पनि सक्दिनँ । म आवाज सुन्न थालेकी छु र म ध्यान दिन सक्दिनँ । त्यसैले मलाई जे गर्दै छु त्यही सहीजस्तो लाग्छ । तिमीले मलाई आफूले सक्ने सबै खुसी दिएका छौ ।’
उल्फले सन् १९४१ मा अमेरिकाको लेविसमा आत्महत्या गरेकी हुन् । उनका ‘अ रुम अफ वान्स ओन’, ‘मिसेस डेल्लोवे’, ‘टु द लाइटहावस’ उनका प्रमुख कृतिहरूमा पर्छन् ।